MUUQAAL: Bisad Xanaaqsan, Yuhuudda Baruurta leh & USCTO Xiriirinta Xiriirka & Hawlgelinta | Martech Zone
MUUQAAL: Bisad Xanaaqsan, Yuhuudda Baruurta leh & USCTO Iskuxirka Wacyigelinta & Hawlgelinta
Khamiis, Maarso 26, 2015 Khamiis, Maarso 26, 2015 Leslie Nuccio
Maxay sameeyaan Qoob-kac iyo Yuhuudi buuran waxay ka siman yihiin magacaabista Madaxweynaha Megan Smith? Oo muxuu taasi inooga sheegayaa suuqgeynta?
Aniga oo ah qof cabiraya wada sheekaysiga guud ee SXSW mudo sadex sano ah, waxaan go aansaday inaan sameeyo tijaabooyin yar sanadkaan anigoo isbarbar dhigaya sayniska xogta (yacni dhageysiga bulshada) shaybaar xog ah (yacni wadada 6-aad oo ay wataan kaamirada shaqaaluhu isla markaana waydiinayaan dadka nacasnimo su'aalo).
Waa kuwan waxa dhacay:
Hadda, haddii ay tahay markii ugu horreysay ee qof warbixin u gudbiya Barack Obama loo adeegsado daraasad xog suuq geyn ah oo ay weheliyaan bisad iyo nin wax ku qosla barta Instagram soo dhiga waa su’aal aanan ka jawaabin. Laakiin haye, taasi waa internetka.
Maxaad ka qabataa SXSW sanadkan? La wadaag fikradahaaga faallooyinka hoose.
Leslie Nuccio waa istiraatiijiyad suuqgeynta suuqgeynta ah ee shirkadda Meltwater oo ku jirtay suuq geynta dijitaalka ah tan iyo markii uu dhacay qarixii ugu horreeyay ee internetka, iyo suuqgeynta warbaahinta bulshada tan iyo sanadkii 2008. Waxay qabatay jagooyin kala duwan oo suuqgeyn ah sannadihii oo dhan, kuwaas oo dhammaantood ku lug lahaa sheekooyinka dadka. Marka aysan ka careysnayn suuqgeynta, waxaad inta badan ka heli kartaa iyada oo wadata ey (adoo isku dayaya inaadan ka fikirin suuqgeynta).
FollowUpThen: Xusuusin Email Bilaash ah oo Fudud